ဟဒီးဆ်: အသင်တို့ လိုက်နာဖြည့်ဆည်းရန် အထိုက်တန်ဆုံး စည်းကမ်းချက်မှာ ကိုယ်လက်နှီးနှောခွင့် တရားဝင်စေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အသင်တို့ လိုက်နာဖြည့်ဆည်းရန် အထိုက်တန်ဆုံး စည်းကမ်းချက်မှာ ကိုယ်လက်နှီးနှောခွင့် တရားဝင်စေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . မိသားစုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ထိမ်းမြားခြင်း။ . နိကာဟ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ။ .
အုက်ဗဟ် ဗင်န် အာမိရ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်းဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အသင်တို့ လိုက်နာဖြည့်ဆည်းရန် အထိုက်တန်ဆုံး စည်းကမ်းချက်မှာ ကိုယ်လက်နှီးနှောခွင့် တရားဝင်စေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။
နိကာဟ် ထိမ်းမြားမှုပြုရာတွင် အိမ်ထာင်ဖက်တစ်ဦးချင်းစီ၌ ကိုယ်စီ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အလိုဆန္ဒများရှိကြပြီး မိမိလက်တွဲဖော်အား ထိုအချက်များကို လိုက်နာရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုအချက်များကို နိကာဟ်၏ စည်းကမ်းချက်များဟု ခေါ်သည်။ ထိုအချက်များသည် နိကာဟ် အထမြောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စည်းကမ်းချက်များအပြင် နောက်ဆက်တွဲ သတ်မှတ်ချက်များပင်ဖြစ်သည်။ ဟဒီးဆ်တော်သည် (နိကာဟ် အထမြောက်ရန် လိုအပ်သည့်) စည်းကမ်းချက်ကို အလေးအနက်ထား ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် လာရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နိကာဟ်၏ စည်းကမ်းများသည် အလွန်မွန်မြတ်လှပြီး မဖြစ်မနေလိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ထိုစည်းကမ်းများကို အကြောင်းခံပြီး ကိုယ်လက်နှီးနှောခွင့် တရားဝင်မည်ဖြစ်သည်။
1: အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးစီသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဥပမာ - အမျိုးသမီးဖက်မှ “မဟရ်” ခန်းဝင်ကြေးတိုးခြင်း သို့မဟုတ် သီးသန့်နေထိုင်စရာ စီစဉ်ပေးရန် သတ်မှတ်ခြင်း။ အမျိုးသားဖက်မှ အပျိုဖြစ်ရမည် မျိုးရိုးကောင်းရမည် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
2: ဤဟဒီးဆ်တော်တွင်ပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟူသော ယေဘုယျသဘောအား အခြားဟဒီးဆ်တော်ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ ပမာအားဖြင့် “(ကမ်းလှမ်းခံရသည့်) အမျိုးသမီးသည် မိမိ၏ (လင်ပြိုင်)ညီမကို ကွာရှင်းပေးရန်(ခင်ပွန်းထံ) မတောင်းဆိုရ။” (စသည်ဖြင့် သာသနာက တားမြစ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခွင့်မရှိပေ။)
3: နိကာဟ်၏ စည်းကမ်းချက်များကို အခြားစည်းကမ်းချက်များထက် ပို၍ အလေးအနက်ထား ဖြည့်ဆည်းရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုစည်းကမ်းများဖြင့်သာ ကိုယ်လက်နှီးနှောခွင့် တရားဝင်မည်ဖြစ်သည်။
4: အိမ်ထောင်ဖက် အချင်းချင်း တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ပေးဆပ်ရမည့် တာဝန်များဖြစ်သည့် စရိတ်ပေးခြင်း၊ ကာမ အကျိုးခံစားခြင်း၊ ဇနီးသည်ထံတွင် ညအိပ်ခြင်း၊ ခင်ပွန်းအတွက် ကိုယ်လက်နှီးနှောခြင်း စသည့် အခွင့်အရေးတို့အား တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဓလေ့ထုံးတမ်းပေါ် မူတည်၍ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
5: နိကာဟ်၏ စည်းကမ်းချက်များကို နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ (၁) “သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော စည်းကမ်းချက်များ” ၎င်းတို့မှာ နိကာဟ်၏ တောင်းဆိုချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သည့် စည်းကမ်းချက်များဖြစ်သည်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအနက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်သူသည် မှန်ကန် ကောင်းမွန်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်။(၂) “သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော စည်းကမ်းချက်များ” ၎င်းတို့မှာ နိကာဟ်၏ တောင်းဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် စည်းကမ်းချက်များဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော စည်းကမ်းချက်များနှင့် အလားတူ စည်းကမ်းချက်များအတွက် ချိန်ဆရမည့် အရာမှာ ကိုယ်တော်မြတ်၏ သြဝါဒတော်ပင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ - “(မွတ်စ်လင်မ်တိုင်းသည် ၎င်းတို့(သတ်မှတ်သည့်)စည်းကမ်းချက်များအပေါ် လိုက်နာရမည်။ သို့သော် ဟလာလ်ကို ဟရာမ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဟရာမ်ကို ဟလာလ် ဟူ၍ လည်းကောင်း သတ်မှတ်ခွင့်မရှိ။” ထိုသို့စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်းသည် နိကာဟ် မပြုမီဖြစ်စေ၊ နိကာဟ်ပြုသည့်အခါ သတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . မိသားစုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ထိမ်းမြားခြင်း။ . နိကာဟ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ။ .